पटक-पटक संसद अवरुद्ध भएपछि काँग्रेसमाथि माधव र बाबुरामको हमला, के भन्छन् देउवा ?
काठमाडौं, ३ असार । मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो युरोप भ्रमण र समसामयिक विषयबारे संसदलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम थियो । तर प्रमुख प्रतिपक्ष काँग्रेसका सांसदले बैठक अवरोध गरेपछि ओलीले सम्बोधन नै नगरी बालुवाटार फर्किए ।
प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले पहिले संसदमा बोल्ने भन्ने विषयमा विवाद कायमै थियो । को पहिला बोल्ने भन्ने विवाद चलिरहेका बेला सभामुखले बैठक सुरु गरेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई बोल्न समय दिएपछि कांग्रेस सांसदले रोस्टम घेरेका हुन् । तर अवरोध भएपछि रोष्ट्रम पुगेका ओली केही नबोली फर्किएका थिए ।
मंगलबार संसदमा भएको घटनापछि विभिन्न नेताले आ-आफ्नो प्रतिक्रिया दिन थालेका छन् । यसै क्रममा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा सांसद माधवकुमार नेपालले प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसमाथि नाजायज माग राखेर संसद अवरोध गरेको आरोप लगाएका छन् । ‘संसदीय अभ्यासमा प्रधानमन्त्रीले बोल्न समय मागेपछि को पहिला बोल्ने भन्ने विषय नै हुँदैन । सरकारले बोल्न चाहेको जनताको आवाजलाई कांग्रेसले अवरुद्ध गर्ने काम गरेको छ’, नेता नेपालले भने ।
यता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद डा. बाबुराम भट्टराई समेत मंगलबार संसदमा भएको घटनाबाट चिन्तित भएका छन् । उनले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदका कारण प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध भएपछि ट्वीटमार्फत् यस्तो चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।
‘संसदमा को पहिला बोल्ने भन्ने मुद्दामा गलफल्ती गरेर अमूल्य समय र श्रोत खेल फाल्नु शोभनीय भएन ! गुठी, लोकसेवा विज्ञापन, प्रेस काउन्सिल, भ्रष्टाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, बजेट विनियोजन लगायत अनगिन्ती जनसरोकारका विषयमा छलफल गरेर समाधान खोज्ने थलो संसद गैरजिम्मेदार र निष्प्रभावी नबनोस्’, काँग्रेसलाई लक्षित गर्दै भट्टराईले ट्विटमा लेखेका छन् ।
त्यस्तै प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले नेपाली कांग्रेसले संसदमा देखाएको व्यवहार अमर्यादित र अशोभनीय भएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘उठेका वा उठाइएका मुद्दाहरूको बारेमा संसदलाई स्पष्ट पार्न नपाउने? नेकाँले संसदमा आज जे गर्यो त्यो हाम्रो संसदीय लोकतन्त्रलाई क्षति पुयाउने अमर्यादित, अशोभनीय र गैरजिम्मेवार व्यवहार हैन?’ रिमालले ट्विटरमा प्रश्न गरेका छन् ।
तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भने मंगलबार भएको संसद अवरोधलाई बचाउ गरेका छन्। प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित भएलगत्तै संघीय संसद भवनमा सञ्चारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले बोल्ने होइन, जवाफ दिने हो । पहिले उहाँले बोलिसकेपछि के बोल्ने मैले ? बोल्ने भए हिजो पनि बोल्थे नि, प्रधानमन्त्रीलाई सुनाउनु थियो आज । जहाँपनि विपक्षीले पहिले बोल्ने हो । जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिने हो । सुरुमा कहाँ बोल्छन् ?’
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनले शितल निवास र बालुवाटार तात्यो, सिंहदरबार भने सुनसान
अपहरित ट्याङ्कर फेला पर्‍यो, कता गयो डिजेल ?
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनः ओली र प्रचण्डले राष्ट्रपतिलाई भेटे
मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनबारे ओली र प्रचण्डबीच बालुवाटारमा छलफल हुँदै
प्रिमियर लिगः यी प्रशिक्षकहरुको जागिर धरापमा
पुराना मन्त्रीलाई हटाएर नयाँ मन्त्री ल्याउने तयारीमा प्रधानमन्त्री ओली !
वेल्सको जितमा राम्से नायक बनेपछि…
टोटनहमले पोचितिन्होलाई बर्खास्त गर्यो, मोरिन्होलाई नियुक्त गर्ने तयारी !
जर्मनीले गोलको वर्षात् गरेपछि…